निजी विद्यालयलाई निषेध गर्दिनँ, नियमन गर्छु : गिरिराजमणि पोखरेल (अन्तर्वार्ता) - गिरिराजमणि पोखरेल
मन्त्री, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि
काठमाडौं– मुलुकमा पछिल्लो समय विकास र समृद्धिको गफ निकै हुने गरेको छ। जुनसुकै मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका मन्त्री रेल र पानीजहाज आउने सपना बेच्नमा मग्न हुन थालेका छन्। तर, विकास र समृद्धिको जग बलियो बनाउने र सञ्चालन गर्ने मात्रै नभई मुलुकको हरेक क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादनको केन्द्रमा रहेको शिक्षा क्षेत्रबारे कमै मात्र सपना वितरित भएको पाइन्छ।
हामी राष्ट्रिय झन्डा पनि ‘ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट’ चित्रका साथमा पढाइरहेका थियौं। बच्चाले के ग्रहण गरिरहेका होलान्! तर यसपटक हामीले पाँच कक्षासम्म रंगीन पाठ्यपुस्तक दियौं।
मैले अर्थमन्त्रीजीसँग पनि भनेको छु, आधारभूत शिक्षामा दिवा खाजाको व्यवस्था गरौं। यसमा हाम्रो उत्पादन, पोषण र लाभदायक सबै पक्षलाई जोडौं भन्ने मेरो प्रस्ताव छ। सो तहसम्म यही वर्ष सकिएन भने पाँच वा तीनसम्म भए पनि सुरु गरौं भनेको छु। नभए मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका जिल्लामा एउटा तहसम्ममा सुरु गर्न सक्यौं भने पनि राम्रो हुन्छ। त्यस्तै, अनिवार्य शिक्षा ऐन ल्याउने र ‘अपर्च्युनिटी कस्ट’को रुपमा त्यसलाई व्यवस्था गरेर यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा म लागेको छु।
मैले दसबुँदे मार्गचित्रमा ‘कम्प्लिट स्कुल’ को अवधारणा ल्याएको छु। अब नेपालका लागि सम्पूर्णतामा एउटा विद्यालय खोल्नुपर्योर। जहाँ बाल शिक्षादेखि कक्षा बाह्रसम्म हुन्छ। भूकम्प प्रतिरोधी भवनहरु हुन्छन्।
हाम्रो शिक्षा बजेटको ७५ प्रतिशत रकम शिक्षकको तलबमै खर्च हुन्छ। अझै पुगेको छैन। त्यस्तै, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम, कृषि, वन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकको दरबन्दी पर्याप्त बढाउन सकिएको छैन। शिक्षाको विकासको बजेट हामीसँग पर्याप्त छैन। चुनावका बेला हामीले शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट पुर्याकउँछौं भनेका छौं, तर अहिलेको बजेट ‘जिरो प्रिन्सिपल’का आधारमा बनेको हो। यसैबीच श्वेतपत्र जारी भयो। आर्थिक अवस्था यस्तो छ भन्ने कुरा राखिएकै छ। तैपनि मैले बजेट बढाउन कुरा त राखेको छु। यसैपटक पनि ०.१ प्रतिशत भए पनि बढाउनुपर्छ भनेर मैले भनेको छु।
तपाईंले गत चैत २८ गते जारी गर्नुभएको पाँचवर्षे शैक्षिक मार्गचित्रमा ‘दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गरिनेछ’ भनिएको छ। त्यसको आधार के हो? त्यो खुला दिसामुक्त घोषणा अभियान जस्तो देखावटी हुँदैन भनेर कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ?
सबै मानिसले उच्च शिक्षा पढ्नुपर्छ भन्ने छैन। राष्ट्रिय आवश्यकता र सम्बन्धित व्यक्तिको रुचीले उच्च शिक्षामा जाने हो। त्यसैले उच्च शिक्षामा अनुदान वा ‘सफ्ट लोन’ दिने प्रक्रिया अघि बढाउँछौं।
नेपालको आवश्यकता अनुसार शिक्षा भएन भनिन्छ। एउटा अन्तर्वातामा प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ– ‘अहिलेसम्मको हाम्रो शिक्षा अन्धाधुन्ध छ । आवश्यकता एउटा शिक्षा अर्कोतिर छ।’ त्यो आवश्यकता अनुसारको शिक्षा भनेको के हो? त्यो किसिमको शिक्षाका लागि के-के योजना छन्?
प्रकाशित : http://nepallive.com
चर्केको भित्ताको आडमा उभिएर शिक्षा मन्त्रीले भने – आजबाट शुरु भयो !
Next story ‘निजीले पूरकको भूमिका खेल्नुपर्छ’
Previous story खुला विश्वविद्यालय शैक्षिक कार्यक्रम सुरु